I-Amoxicillion Sodium yokuqulunqwa kwe-Injection: Iqulethe kwigram nganye: Amoxicillin sodium 50mg. Intengiso yenethiwekhi 1g. Inkcazo: I-Amoxicillin yipenisisi ebanzi ye-semisynthetic penicillin eneentshukumo zebhakteria ezichasene ne-Gram-positive kunye ne-Gram-negative bacteria. Uluhlu lwempembelelo lubandakanya iCampylobacter, Clostridium, E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, penicillinase-negative Staphtlococcus kunye neStreptococcus spp. Amanyathelo okubulala iintsholongwane ngenxa yothintelo lwesisele esodongeni ...
I-Procaine Benzylpenicillin eyomeleziweyo yokuNgena
I-Procaine Benzylpenicillin eyomeleziweyo yoYilo lwe-Injection: I-each vial iqulethe: I-Procaine penicillin bp ………………………, 3,000,000 iu Benzylpenicillin sodium bp ………………………. Intshukumo yeyeza uParicillin yintsholongwane encinci engabonakaliyo eyenzeka ikakhulu kwiibacteria ezinesifo esinegram kunye ne-cocci ezimbalwa ezingekho mgaqweni. eyona nto iphambili ...
I-Diminazene Aceturat kunye nePhenazone Granules yesitofu
I-Diminazene Aceturate kunye nePhenazone Powder yokuFakelwa kwezinto: i-Diminazene aceturate ………………… 1.05g Phenazone ... ngokuchasene ne-babesia, i-piroplasmosis kunye ne-trypanosomiasis. Iimpawu: I-Prophylactics kunye nokunyangwa kwe-babesia, ipiroplasmosis kunye ne-trypanosomiasis kwinkamela, iinkomo, iikati, izinja, iibhokhwe, ihashe, iigusha kunye neehagu. Unxibelelwano: I-Hypersensitivity to minimazene okanye phenazone. Umlawuli ...
I-Ceftiofur Sodium yeSitofu
I-Ceftiofur Sodium yokubonakala kwe-Injection: Imhlophe kumbala ophuzi. Izimpawu: le mveliso iluhlobo lwearhente ye-antimicrobial kwaye isetyenziswa ikakhulu kunyango lokosuleleka kwiintaka zasekhaya nakwizilwanyana ezibangelwa yintsholongwane ebuthathaka. Kwinkukhu isetyenziswa ekukhuseleni ukufa kwangoko okubangelwa sisisuichi coli. Kwihagu isetyenziswa kunyango lwezifo zokuphefumla (iihagu bacterial pneumonia) ezibangelwa yi-actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, salmonella c ...